BOKY MAINTY FILM
Nahoana Izy no novonoina? Tsy notanisaiko ny souris ary tsy adikako hoe totozy na voalavo tahaka ny hoe CD-ROM vierge tsy adikako hoe kapila manjelatra virijiny satria tsy dia mahazatra ny sofina ka mety hanasaro-javatra. Ny fampiasana azy no angamba sarotra fa raha ny lesona mikasika debug kosa dia mora. Indreto izy roa ireo: Ilay homeko ny sombin-kanina lemako no izy. Ary na dia ny Kristiana azadia mila mahafantatra ny marina mba tsy ho voafitaky ny Kristy sandoka.
Fikambanana Toerana iraisana Toerana iombonana Non-malagasy speakers. Inona io fiteny io? Artiste iray nametraka, sy tsy maty intsony ao am-po ny malagasy i Tovo J’Hay taty aoriana refa tafapaka tsara tany amin’ny mpaka fy azy. Manana sakafo, fitafy, fiteny sy ny sisa. Rehefa maty koa Kristy dia tsy nisy notapahina ny taolany. Tsy misy mafy tsy laitry ny zoto. Mazotoa mamaky, mandalina, mampitaha. Tsy mahavariana anao ve izany?
Nefa ahoana ary ny famangiana manjo atao hoe fomban-drazana izay tsy hit any maharatsy azy?
Nananany ny fahefana sy voninahitra tany an-danitra, fa nialanyizany rehefa nidina tety an-tany Izy. Ahoanano fomba fjlm io teny io ho olona? Mivoaka boky mihitsy nymomba io tantara io. Betsaka no nilaza fa niova famindra i Tovo J’Hay.
Maro be ihany koa ireo mpitendry bokyy mety tsy ho voatanisa eto daholo fa hialan tsinyizay niaraka namindra tamin’i Tovo J’Hay teny an-dalana teny: Izany noo ilay antikristy efa tongasahady. Averina ny tsianjery raha vao mifoha maraina.
Teo no nifankahitany an’i ARO zanaky Bessa izay niara niasa taminy akaiky ka namoaka singa iray avy hatrany, Lohateny iray tsy maty ambavan’ny mpaka fy mandrak-ankehitriny dia i “Mbola hafa” izay namaritra ny lalan-kombany sy ny gadona ho voiziny nanomboka teo. Fikambanana Toerana iraisana Toerana iombonana Non-malagasy speakers. Diniho ny disque dur.
Rahamisy olona mitandrina ny teniko, dia tsy mba maintj fahafatesana izymandrakizay. Hafa ihany hoy izy ny tany niaviana. Izay no mahatonga ny fiangonana katolika mampiasa ny trinite.
Jereo fa tsy mitovy ny loko. Jehovah mihitsy nomanamasina io andro Sabata io. Tsy aleo ve ianao ihany no dokotera mitsabo io solosaina lafobe io? Hita tao amin’ny ” https: Mahereza, aza matahotra, indro,Andriamanitrareo ho avy mitondra famaliana, dia ny famalian’Andriamanitra,eny, Izy tokoa no ho avy ka hamonjy anareo.
Averimberina dia lasa fahazarana na habitude. Marihina fa samihafa ny SEX ambarako eto sy ny sexe lahy na vavy.
Fianarana Boky Apokalypsy- Pasteur Mailhol – Toko 1-11 – 2016 edited10
Tsy zava-miafina aminao izany ordinateur izany. Raha mankalaza ny tenako Maintj, diatsinontsinona ny lazako; ny Raiko, Izay ataonareo fa Andriamanitrareo, Izyno mankalaza Ahy. Rehefa nahazo ny loka voalohany taminy fifaninanan-kira tany Antsirabe ny tarika dia nitety faritra maro teto Antananarivo.
Gadona iray manana endrika Pop Rock, mora henoina, nefa azo ovaina amin’ny endrika samy hafa, Manamporofo an’izany ny fampiaraham-peo nataon “Raboussa” sy “Isa roa Telo” niarah’ny tamin’ny tovo J’hay tamin’ny fandaharana iray tao amin’ny RTA, Endrika hafa vaovao no nitondran’ry zareo flim kanefa tsy nampoizina ny fivoakan’ilay hira.
Programmation no tanjona fa tsy bureautique.
Tsy manity tsy mahalala fa i Tovo J’Hay dia hita matetika eny amin’ny fanokafana fetim-panambadiana na Ouverture Mariage Hita soritra eny amin’ity fi,m ity araka ny raki-tsary izany. I Daniela irery ihany no nijanona teo. Raha toa ka misy jesosy mipoitra aminao, na Pasteur ianao, msinty diakona,na inona na inona, ary tsy manao fisikinam-bolamena akory izy, ny tarehinytsy tahaka ny masoandro akory, ary afaka miresaka mivantana aminy ianao.
Tovo J’Hay, anisan’ireo hira nosoratan i Tovo Voalohany niaraka tamin ny “Naleoko izy ho any”, sy “Ho ahy sy ho anao” duo miaraka amin Lova RakotoNanomboka teo no niainga ny famoronana, Tsotra ny tonony, tsotra ny mozika, Sary iray tsy hadino ho an’izay nahita azy teny am-boalohany, somary lavalava volo nitendry piano ra nahatadidiy tamin izany isika.
Boky Mainty, film –
Oviana ary izy io no natao tonga nofo? Aza tonga dia mivadika informatique fa mianara. Fotsy maintj ilay faty. Misy sary eo akaikiny eo ahazoana manavaka izany.
Raha avy ny orana mety ho tapaka ny jiro, mandeha ve ny ordi?
PTICHKA PEVCHAYA FILM
FILM GUILLAUME CANET LA PROCHAINE FOIS JE VISERAI LE COEUR STREAMING